0.2 Mienzaniso yehupenyu hwechokwadi Heano mamwe emisasa yangu yevaeni munguva yakapfuura. 3 zvinhu zvaunogona kuita iye zvino kuti uvandudze blog yako Kuburitsa maitiro kuwedzera mikana yekubudirira Kuramba muhutano hwekubatana: Nhungamiro yevatanga 2. Crowdsourcing-pos
0.3 4. Sindikaat blogplasings kune dzimwe nzvimbo dzakakurumbira
0.5 6. Blogopmerkings
0.6 7. Forumpos
1.1 Idee # 1 – Nyora uye utengese e-boek
1.3 Idee # 2: Kukurudzira michina yakabatana mumamiriro akasiyana-siyana
1.4 Idee 3: Shandisa basa bhodhi
2 TL; DR / Wrap Up Up
Vamwe vanoda ku tanga blog uye kuita rumwe rutivi rupiro rupiro muIndaneti. Vamwe, kuti vasiye nzira dzese dzekutengesa kushanda, kana kuwedzera bhizinesi ravo paIndaneti, kana kusiya basa ravo 9-tot-5, nezvimwewo.
Zvechokwadi ndinoda kubatsira vermy vandinoziva kuti vanoita izvi. Asi, ndinokwanisa kugovana zvakanyanya panguva yekusangana-munhu kana Whatsapp kana Facebook Messenger.
Heano maitiro mashomanana echirongwa wandakaita paneel Facebook munguva ichangopfuura.
4. Sindikaat blogplasings kune dzimwe nzvimbo dzakakurumbira
Iva nechokwadi chekuti zvitsva zvako zvitsva zvinodzokera kumashoko ako ekare kutora mumugwagwa. WHSR blog inobatanidzwa kune dzakawanda dzemasayiti anozivikanwa anosanganisira Social Media Nhasi uye Bhizinesi 2 Gemeenskap.
Ita shamwari nyowani dzeblogger uye kusimudzira mabloggi emumwe neumwe aanlyn. Ini handifarire zvikuru kutaura nevatorwa (nokutendeseka ini ndakashata nezvazvo).
Siya mazano anovaka pamusoro pevamwe ‘blogs (musaita spam!). Nyora nenzira inoita kuti vanhu vade kuziva zvakawanda pamusoro pako.
Kutanga, Miller Miller anoenda mune imwe tsanangudzo, achipa maonero akasiyana-siyana anoenderana nechokutanga chekutanga uye achiita kuti vaverengi vazive nezvake uye kufanirwa kwake kune musoro. Nokugovana zvaanoziva iye, anoratidza unyanzvi hwake pachedu yekutsvaga, achiwana ruzivo rwangu uye achinditora kuti ndidzidze zvakawanda pamusoro pake … zvakanyanya zvokuti ndakatarisa paMo Moz-profiel uye zvino mut.
Tsvaga mazano akakodzera mu niche yako (Google kutsvaga "navraag" + inurl: forum), zvinyorwa zvinobatsira zvinyorwa / mhinduro, kukurudzira nzvimbo yako paine zvinyorwa zvisungo kana kurasa zvikwereti mumasangano ako, asi kana chete zvakakodzera.
Nharaunda yemagariro eGoogle + yakafanana zvakakosha semusangano – chinhu chinoita kuti kubudirire ndechokupa zvakawanda zvizhinji zvemashoko anokosha kuvanhu vemunharaunda mukutsinhana kwevateveri vezvevateereri vehi fumi ne.
Munhu het anoda freebies. Mushure mevose vasingadi kuwana chimwe chinhu nokuda kwekusununguka?
Bhizinesi rangu rebhizimisi paWeb Hosting Secret Revealed (WHSR) iri kukurudzira kushandira mazano. Ruit kungopinda mukati meGoogle SERP yakawanda, ndakawana zviri nani kutarisa webontwerpers vanogona kunge vachishandisa mazano angu ekugamuchira. Kuti ndigare pachigaro nevateereri ivavo, ndakagadzira mitoro yekusununguka.
vermy zvisikwa zvemasikirwo ehurukuro? Yep – freebies inotarirwa kune vateereri vangu vakuru.
Mifananidzo yakasununguka zvirokwazvo yakagamuchira kunyanya kubva kune blogosphere, ichiunza vatenzi vatsva uye vateveri vevanhu. Kana iwe unofarira, izvi zviri zvishomanana zveblogi izvo zvichitaura maharabi.
Inkomste teenoor Twitter-volgelinge
Vazhinji mablogiki vanoshamisika kuti mitemo yekuvimba nayo inouya pakusimudza mari yavo. Vakomana paGavhuna Hacker vakarangana mari pamwe neboka re metrics uye hapana chakaswedera pedyo nevethingi ve Twitter.
Kukura vateveri vako veTra & verkeer
Mazano mashomanana anokurumidza mukukura vateveri vako uye kutungamirira motokari kubva ku op Twitter:
Tweet gereeld. Kuti uiteensit kuti vateveri vako vadzoke uye vakanise pa tweet yako, iwe unofanira kutanga kuonekwa pa Twitter. Kuti ndiite izvi ndinoshandisa purogiramu inonzi yainzi Dzoserai Old Post uye kupedza 20 – 25 maminitsi zuva rimwe nerimwe paComm.it kuti tibatane nevateveri vangu ve Twitter.
Iva nehupenzi – taura kune vamwe tweets, taurirana hurukuro dzakakurumbira, uye tweet inofambisa hashtags.
Kusvikira-pano, iwe wakadzidza –
Nzira yekuwana niche inobatsira sei, uye
Nzira yekuwana nzira yakananga ku blog.
Izvozvo zvakati, yeuka mupfungwa kuti pane nzira dzakawandisa dzokuita mari paIndaneti. Kana iwe ukatarisa kuchinyorwa cha Ashley Faulkes, chaakafukidza zvinopfuura 100 aanlyn-sake-idees; iwe uchaona kuti blog ingori chikamu cheiyo mufananidzo mukuru. Mibvunzo yekuzvibvunza iwe, sekufunga kwaAshley, ndeiyi:
Idee # 1 – Nyora uye utengese e-boek
Kutengesa ebook ibhuku rekugadzira monetization maitiro.
E-boeke inopa tani yezvibatsiro:
Nyanzvi dzakawanda dzakatanga kuzviitira zita ne ebook. Remit Sethi, muvambi we Ini Ndichakudzidzisa Iwe Kuti Uve Wakapfuma uye mumwe wevanonyanya kuzivikanwa mubhizinesi rekuInternet, akatengeswa bhuku hark rokutanga nokuti $ 4.95.
Bhuku iyo eitungamirira kune a New York Times Topverkoper uye 14 michina yakasiyana-siyana yepamuyamisi yakaita kuti ave munhu akapfuma kwazvo – zvose zvakakwana paIndaneti uye zvakanyanya kutengeswa kuburikidza nebhuku rake.
Sarudza musoro. Nyora nezve chimwe chinhu icho vateereri vako vanoda kudzidza, asi vasingagoni kudzidziswa mune imwechete blog blog. Vazhinji vari kuda kubhadhara kune imwe-kumira-shopu yeruzivo urwu.
Tumira kune imwe maona ebook e sjabloon. Heano zvishoma kubva HubSpot.
Gadzira chivako (kureva. Canva) kana kubhadhara freelancer kuti aite (‘n self-vryskutontwerper kos ~ $ 26 / wag nguva dzose maererano neongororo yangu yekubhadhara)
Photoshop yako omslagvenster 3D e-boekafbeelding. Pat Flynn akaisa pamwe a Video huru pamusoro pekuita izvi.
Idee # 2: Kukurudzira michina yakabatana mumamiriro akasiyana-siyana
Zvadaro tevera mirayiridzo yekuti uve wehukama. Kana uchinge wava mumwe, iwe kazhinji unowanzoona ID yekutsvaga nzvimbo panzvimbo yekupedzisira julle URL imwe neimwe.
Tora pasi kuti unoshandisa sei chigadzirwa kana basa. Inobatsira hier kurongedza basa rako? Inokubatsira ne SEO hier? Inokubatsira kuti usvike kune vane simba vanoblogi?
Unoda kushandisa chimwe chigadzirwa asi met behulp vanakwanise? Ko kana uchigona kuita kuti mari yako idzokere munguva pfupi?
Kutanga, ita rondedzero yemichero / maitirwo aunoda kushandisa. Zvino enda kune webblad uye ona kana vane sangano rekubatana.
4- Kukurudzira michina yakabatana mune stuur ‘n e-posadres per e-pos
E-pos chinhu chine simba kushambadzira chishandiso. Ndiyo imwe yemashoma mashoma ayo vanhu vanoongorora zuva nezuva uye vari vanoda kuendeswa kune.
‘N E-pos-terugvoerder inofanirwa kutenderera kwemaimeri inotumirwa kuvanhu apo inyoresa kune yako e-poslys.
Heano maviri angu maidiwa hulpiwa:
Zvose izvi zvinokubvumira kuti gebruik ‘n outoresponder.
Kungofanana nekusimudzira michina yekubatana pabhogi yako, kukurudzira zvinhu izvi mu e-pos auto-terugvoerder zvinogona kuunza mari yekusarudzira iwe.
Ek is unogona kana kuvasimudzira zvakananga mumaemail kana kugadzira blog post tutoriale uye kusimudzira izvo. Hoe dan ook, ruit mukana wekuti mari muhomwe.
Hezvino zvandiri kukurudzira neako outo-antwoorder:
Paunenge uchisimudzira chigadzirwa, tarisa-ruit izvo zvavanogona kuwana uye kwete pachigadzirwa ichocho. Kana iwe wakawana mhinduro uchishandisa, ita shuwa kutsanangura izvo zvakadzama. Izvi zvichaita kutengeswa kwako.
Idee 3: Shandisa basa bhodhi
Semuyenzaniso, Problogger-baanraad inobatanidza-bloggers nemakambani anotarisa kuti akwanise munhu kuti aumbe zvigadziro kwavari.
Ek is unogonawo kupa vanotsvaka basa kuti vawane bhodhi.
TL; DR / Wrap Up Up
Nhamba yehupenyu hwehu blog yakakosha. Asi kutanga kutora mari, bhulogi yako inodawo kuva niche inobatsira uye kuwana zvakakwana zvinotarirwa nemugwagwa.
Heino imwe yekupedzisira yeuchidzo ndisati ndapedza iyi pos: Zvizhinji zvinobva chiito.